Ugbu a Ọdịnaya nke Ọdịnaya Ahịa 2014 | Martech Zone
Mgbe m chọtara infographic dị ka nke a site na LinkSmart, ihe nkwalite ọdịnaya, enwere m obi ụtọ mgbe niile ide Corụ maka ịde blọgụ maka Dummies na ndụmọdụ na-adịghị agafe agafe ọ na-enye ụlọ ọrụ. Ọ bụ ezie na isi njin ọchụchọ nwere ike bụrụ ntakịrị oge, usoro ndị ọzọ siri ike n'ime akwụkwọ ahụ. Ginglọ ọrụ ịde blọgụ bụ lynchpin nke usoro ịre ahịa ọdịnaya ọ bụla ma tolite n'ike n'ike kwa afọ.
Anyị na-ebi n'ọgbọ ebe Ọdịnaya Ntanetị bụ ma eleghị anya ihe kachasị adọrọ mmasị na mgbagwoju anya ọ dịla. Site na mgbasa ozi ọhụụ maka ibipụta akwụkwọ na ụzọ ọhụụ iji ruo ndị na - agụ akwụkwọ na - emepe emepe kwa ụbọchị, anyị dị ka ndị na - ebipụta akwụkwọ ga - anọrịrị n’elu Usoro Ọdịnaya Ọdịnaya iji mee ka ọtụtụ ndị na - agụ akwụkwọ nwee ọdịnaya anyị.
Eziokwu bụ na ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị chọrọ ịnweta ntụkwasị obi, njikọ mmetụta uche, nnweta na njide nke ndị ahịa na ntanetị, ị ga-ewulite ikike ma nwee isi ihe ọmụma maka ndị ndu na ndị ahịa. Industrylọ ọrụ ahụ nọgidere na-agbanwe - na-ewepụta ọtụtụ ọkwá ọhụrụ na nnukwu mkpa maka ndị edemede ukwu, ndị na-ese ihe na ndị na-akọ akụkọ.
Tags: 2014ọdịnaya ahịa ahịa ọdịnayanjikọala nke ire ahịa ọdịnaya